May 13, 2019 – Myanmar Photo News
2nd Hand Items sales for donation to general hospital
အဟောင်းတွေရောင်းလို့ စက်တွေလှူ ပြည်သူ့ ဆေးရုံ ကိုတို့ ဝိုင်းကူ ” ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အဟောင်းရောင်းပွဲ ပထမနေ့ ရောင်းသူဝယ်သူတွေနဲ့စည်ကားနေ ” အဟောင်းတွေရောင်းလို့ စက်တွေလှူ ပြည်သူ့ ဆေးရုံ ကိုတို့ ဝိုင်းကူ ” ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အဟောင်းရောင်းပွဲ ကို Myanmar Culture Valley တွင် ယနေ့ မေလ ၁၃ရက်နေ့ မှာ […]
May 13, 2019 May 13, 2019 ccp Local, News
Made by National consultants peace flagstaff and bell smiled Donation
ငြိမ်းချမ်းရေးတံခွန်တိုင်နှင့် ခေါင်းလောင်းတော်အား နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေစက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာ ပြုလုပ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နတ်မောက်မြို့တွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗုဒ္ဓါဘိသေကပူဇာ မင်္ဂလာငြိမ်းချမ်းရေးတံခွန်တိုင်နှင့် ခေါင်းလောင်းတော် ရေစက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ “နတ်မောက်မြို့ ဒီပင်္ကရာကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ သစ္စာအောင်၊ မေတ္တာအောင်၊ ပညာအောင် ဘုရားသုံးဆူတို့ကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ အဘိုးအဘွားများက တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဘုရားသုံးဆူအတွင်းမှာရှိတဲ့ မင်္ဂလာငြိမ်းချမ်းရေးတံခွန်တိုင်ခေါင်းလောင်းတော်ကို အခုလာရောက်ပြီး ရေစက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု နတ်မောက်ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။ ဒီလှိုင်း(ချောက်) […]
UB103 XY.AGQ E.190 Tadaoo airport for aircraft landing gear failure frustrations
ရန်​ကုန်​​လေဆိပ်​မှ မန္တ​လေးသို့ထွက်​ခွာသွား​သော UB103 XY.AGQ E.190 လေယာဉ်သည် တံတားဦးလေဆိပ်အဆင်းတွင် landing gear ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ရာ ဆီဖောက်ထုတ်၍ အန္တရာယ်ကင်းစွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်​။ လေယာဉ်​အမှုထမ်းအပါအဝင်​ ခရီးသည်​ ၈၂ ဦးလိုက်​ပါလာ​ကြောင်း၊ နိုင်​ငံခြားသားခရီးသည်​ ၈ ဦး၊ ပြည်​တွင်းခရီးသည်​ ၇၂ ဦးနှင့်​ O/C.၂.ဦးတို့ဖြစ်ပြီး ​လေယာဉ်​မ​တော်​တဆဖြစ်​စဉ်​​ကြောင့်​ထိခိုက်​ဒဏ်​ရာရမှုမရှိ​ကြောင်းသိရသည်​။ အဆိုပါလေယာဉ်အားတာဝန်ယူမောင်းနှင်ပေးခဲ့သူမှာ လေယာဉ်မှူး မြတ်မိုးအောင်ဟု သိရှိရသည်။ ထွန်း(​နေပြည်​​တော်​)
May 13, 2019 ccp Local, News
Old harbor City of Kathar
ရာဇဝင်ထဲကမြို့တော် (သို့) ဆိပ်ကမ်းမြို့ဟောင်း ကသာ ကသာမြို့ရဲ့ တည်နေရာလေးက ???? စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့မြောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိပြီး ကိုလိုနီခေတ်အတွင်းမှာတော့ အရမ်းကိုစည်ကားခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းက ဆိပ်ကမ်းမြို့လေးတစ်မြို့ပါ။ ကသာမြို့လေးရဲ့ အချို့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီး🏠တွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့အငွေ့အသက်တွေအပြည့်အဝပေးနိုင်မှာသေချာပါတယ်။🌳🌿သစ်တောအုပ်များ အလွန်များပြားတာကြောင့် နေချင်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် စွဲဆောင်ထားတဲ့ ရာသီဥတု လေးကိုလဲပိုင်ဆိုင်ထားသလို ခရိုင်ရုံးများစိုက်ရာမြို့လဲဖြစ်ပါတယ်။ ကသာမြို့လေး လူသိများလာရခြင်း အဓိကအကြောင်းအရင်း ????? ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာ စာရေးဆရာ […]
May 13, 2019 May 13, 2019 ccp General, Local, News, Photo
WonderFest Back to School
WonderFest Back to School .. ” ဒီပွဲမှာ ဘာတွေ မြင်တွေ့ ရနိုင်မလဲဆိုတော့ Magic show ချစ်စရာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ Animal show တေးသံရှင်တွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုများလည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး .. ရင်ခုန်စရာ ဂိမ်းအစီအစဉ်တွေကို ဝင်ပြိုင်ကြပြီး ဆုလက်ဆောင်တွေ ရယူနိုင်ပါမယ် တဲ့ .. .. ပြီးတော့ […]
May 13, 2019 May 13, 2019 ccp Festival, Local